संविधानबाहेक जे पनि हुनसक्ने अवस्थामा मुलुकलाई पुर्‍याएका छन्-पूर्वन्यायाधीश केसी
"हिजो भर्खर त्यै विवाद आएको थियो, प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रीको भाग खोज्नुभएको भनेर । र, अहिले भयो पनि त्यै । "
काठमाडौँ -प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले मन्त्रिपरिषद्‌मा भाग मागेको भनेर भएका अनुमानलाई पुष्टि गर्नेगरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री नियुक्त गरेका छन् । कांग्रेससँग पुरानो साइनो भएका भए पनि गैरसांसद हमाललाई मन्त्री बनाउन नातेदार प्रधानन्यायाधीश जबराको जोड रहेको सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले नै बताइरहेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रिपरिषदमा भाग मागेको सार्वजनिक भइरहँदा सर्वोच्च अदालतले कडा भाषामा खण्डन गरे पनि अन्ततः त्यो कुरालाई पुष्टि गर्नेगरी नियुक्ति भएको छ । यसै विषयमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीसँग गरिएको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
-बाघ पनि कराउनु र बाख्रा पनि हराउनुु भनेजस्तै भयो । बाख्रालाई अरुले लगेको भए पनि बाघ कराएको भएकाले बाघले नै लगेको जस्तो भयो । हिजो भर्खर त्यै विवाद आएको थियो, प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रीको भाग खोज्नुभएको भनेर । र, अहिले भयो पनि त्यै ।
अहिले नेपालमा संविधानबमोजिम हुनसक्ने होइन कि संविधानबाहेक जे पनि हुनसक्ने अवस्थामा मुलुकलाई पुर्‍याएका छन्, राज्यका तीनवटै अंग कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकालाई । संविधानबमोजिम हुनुपर्ने होइन कि संविधान बमोजिम हुन नसक्ने काम पनि भए भने कुनै अनौठो नमाने हुन्छ । त्यसैले यो हुनु कुनै अनौठो मान्दैन म । नेपालमा यस्तो निरन्तर चलि नै रहन्छ, जबसम्म जवाफदेही हुँदैनन् ।
चोलेन्द्र शम्शेर जबरा तीन करोड नेपाली जनताको प्रधानन्यायाधीश हो । उहाँमाथि शंका भयो, चोलेन्द्र शम्शेर जबराले भाग मागिसकेको भनेपछि । उहाँले त नेपालका प्रमुख मिडियालाई बोलाएर भन्नुपर्‍यो, मलाई यस्तो आरोप लागेको छ, मैले त्यो गरेको होइन । उहाँले केही भन्नुभएको छैन । सर्वोच्च अदालतले भनेर त कसरी पत्याउने र त्यसकारण उहाँको खण्डन पुगेको छैन । नेपाली जनतालाई उहाँले नै औपचारिक माध्यमबाट भन्नुपर्छ अनि मात्र जनताले पत्याउँछन् ।
यो व्यवस्थाको सिद्धान्त समाजमा कुनै मान्छे यस्ता हुन्छन् जो मन्त्रिपरिषद्मा नभई नहुने । उनीहरूको अनुभव, विज्ञता, ज्ञान, योगदान राज्यलाई आवश्यक पर्छ । तर ती मान्छे सांसद छैनन् भने ६ महिना मन्त्री राख्ने हो । पछि निर्वाचनबाट जितेर आउँछन् भन्ने विश्वासमा गैरसांसदलाई मन्त्री राखिन्छ । ६ महिना सांसद सदस्य नभएकालाई राख्न मिल्छ । संविधानअनुसार गैरसंवैधानिक हुँदैन । तर राख्ने उद्देश्य के हो रु भन्ने हेर्नुपर्छ । गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउन संविधानले दिएको छ । त्यसमा आपत्ति हुँदैन ।
सरकारविरुद्ध गम्भीर संवैधानिक व्याख्याका र प्रभाव पार्ने मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा कार्यपालिका र न्यायपालिबीच जे(जस्ता लेनदेनका दृश्य देखिइरहेका छन् यसले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई कत्तिको असर पर्ला ?
शक्ति पृथकीकरण त पोलेर खाइसकियो । शक्ति पृथकीकरण खाली संविधानको पानामा छ व्यवहारमा लागू छैन । अहिले सर्वोच्च अदालतमा दिनेश त्रिपाठी र ओमप्रकाश अर्यालको रिट संवैधानिक परिषद्बाट भएका नियुक्तिविरुद्ध जसमा प्रधानन्यायाधीश पनि विपक्षी छन् , १० महिना कुर्दा पनि पालो पाएन । त्यसबाट नै शक्तिपृथकीकरण र संविधानवाद विस्तार विस्तारै नास गर्दैछौं भन्ने हो ।
यो सितिमिती जाँदैन । मान्छेको शंका रहिरहन्छ । जबसम्म प्रधानन्यायाधीश स्वयंले नेपालका प्रमुख मिडियालाई बोलाएर प्रेस कन्फ्रेन्समार्फत आफूले कुनै आधारसहित यो होइन, मलाई अनावश्यक रूपमा जोडिएको हो भनेर प्रस्ट पार्नुहुन्न तबसम्म तपाईं हाम्रो मनमा शंका भइरहन्छ ।
सर्वोच्चले त भाग मागेको होइन उसले कसरी खण्डन गर्न मिल्छ ? सर्वोच्च त तेस्रो पक्ष हो । सर्वोच्चले भाग मागेको भन्ने होइन, प्रधानन्यायाधीशले भाग मागेको भन्ने समाचार आइरहेका छन्, त्यै पढेको हो । न्यायपरिषद्ले खण्डन गरेर हुन्छ त्यसो भए त न्यायपरिषद्ले खण्डन गरिदिए भयो नि